Raw PRL-8-53 powder (51352-87-5) hplc = 98% | AASraw SARMS powder
/ Products / SARMS / PRL-8-53 powder
MASHOKO aya ane maitiro uye maitiro ekugadzira kubva ku gramu kusvika kuhuwandu hwe PRL-8-53-powder (51352-87-5), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
PRL-8-53 powder (chimiro zita rinonzi Methyl 3- (2- (benzyl (methyl) amino) ethyl) benzoate) inogadzirwa neotropic yakagadzirwa muna 1972 uye yakave nekodzero muC1975 nekupedzisira Dr. Nikolaus Hansl, neuropharmacologist paCreighton University muOmaha, Nebraska.
PRL-8-53 powder video
Raw PRL-8-53 powder basic Characters
Name: PRL-8-53 powder
Raw PRL-8-53 powder mukusimudzira uropi hunoita uye kuwedzerwa kwekuwedzera
2. Raw PRL-8-53 powder Ushumiri:
Chidzidzo chega chevanhu pa PRL-8-53 powder chainge chakavakirwa pakugadzirwa kweiyo imwe 5 mg dose. Iko hakuna dhesi pamusoro pekubudirira kana kukwanisa kutyiswa kweimwe mimwe miviri yevanhu.
Warning on Raw PRL-8-53 powder
Maererano nouchapupu nemakonzo, PRL-8-53 powder inoratidzika kuva dopamine agonist. Izvi zvinoreva kuti inogona kuvandudza dopamine receptors uye inowanzoshandiswa muvarwere vePasinson. Kune vanhu vasingatsvaki izvi, zvinogona kuva chikamu chisingadiwi che PRL-8-53 poda yakasvibirira.
Zvidzidzo zvekutyisa mumakonzo zvinoratidza chidimbu chakakwirira neLD50, asi zviri pachena kuti humwe uchapupu hunodiwa. Uyewo, inoratidzika sechinhu chinogona kumira kunze kwePL-8-53 powder kunoderedza kushanda kwemotokari mukati meuropi.
PRL-8-53 Mechanism Of Action
Iyo nzira yekuita kweiyo nootropic iye zvino haisati yazivikanwa asi inogona, muchikamu, inorara nenzira dzecholinergic. Dr Hansl, muumbi wekemikari anotaura nezveP Phi Delta Kappan magazini kuti PRL-8-53 powder inoita kuti uropi huve nemhinduro kune acetylcholine, uye chikamu hachisi chinokurudzira. Ipa patent ye PRL-8-53 inenge yakasvibiswa yehupfu hunokonzerwa necholinergic mechanisms.
Chiyero chemhuka chinosanganisira makarani chakaratidza 4mg / KG yakawedzerwa apomorphine (dopamine agonist) yakawedzera kukumanikidza kugadzika mumakonzo, zvichiratidza kuti PRL-8-53 poda yakasvibiswa pane imwe nzvimbo inonzi dopamine agonist. Chidzidzo ichocho chakacherechedza kugadziridzwa mumamiriro ezvinhu ekudzivisa kudzivisa. Iyi nootropic haisimudzi maitiro eamphetamine mumakonzo uye haisi kuvhara maitiro eMOO.Chidzidzo chimwe chete muvanhu chinotaura zvishoma kuti PRL-8-53 poda yakakosha inokonzera dopamine kusunungurwa uye inokonzera kusagadzikana kusina serotonin.
Zvipo zveRaw PRL-8-53 powder:
Icho chisina kushandiswa chakabudiswa ku PRL-8-53 powder chinoratidza kuwedzera kuduku kweshoko rekuwana panguva yekuyeuka basa. Vadzidzi vakapiwa 5mg ye PRL-8-53 powder maawa 2 vasati vayedzwa uye vakabva vabvunzwa kuti vateerere kurekodhwa kwemashoko e12 mune chimwe chirevo uye vorondedzere panguva dzenguva yemberi (nguva pfupi mushure mekuedzwa, zuva rakatevera uye 4 mazuva akatevera). Minor zvikomborero zvakawanikwa zvekutsvaga kuwana, asi huwandu hwe 80% hunoonekwa hwevanhu vakaedzwa gare gare kune avo vakambotora zvakashata kuongororwa (mazwi 6 / 12 zvakarurama kana pasi).
(2) Isina kunyorwa (Zvinoita) Zvibatsiro - Geometric Pattern Maitiro Okuita
Zvinofadza kuti muumbi wekombani anotaurawo mamwe mimwe miedzo inenge isingawaniki kana kusina kunyorwa. Mune Zvinyorwa zvakabudiswa muna 1978, Dr Hansl anotaura kuti PRL-8-53 powder inowedzera huwandu hwemashoko mune rimwe geometric pattern maonero ekuziva. Vatori vechikamu vakaratidzirwa mahedheni ejemiometri uye vachikumbira kuvatora kubva mumusoro, kuwedzerwa kwehuwandu kwakaonekwa.
(3) Mental Arithmetic Kudzidzira
Muchikamu chimwe chete, Dr Hansl anotaura nhamba yepamusoro yekugadzirisa maitiro apo vatori vechikamu vaifanira kubvisa 7, kuwedzera 1, kubvisa 7, kuwedzera 2 nekudaro kusvikira "chinangwa" chikawanikwa. Nguva shomanana kune "chinangwa" nhamba yakatarwa mu PRL-8-53 boka guru rehupfu.
Dr Hansl anokurukura muedzo apo nyaya dzaibvunzwa kuti dzigadzire mazwi kubva kune dzakawanda dze tsamba netsamba. Somuenzaniso "UR" yaifanira kushandurwa kuva shoko chero ripi zvaro nekuwedzera tsamba pakutanga nekuguma kweshoko, pachinotora dots uye netsamba. "UR" inogona kuva "ikozvino" somuenzaniso. Kuvandudzika kwezvakawandisa kunowanikwa kune vatori vechikamu vakanga vatora mishonga.
Kutenga sei PRL-8-53 poda kubva kuAASraw